HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo dagaal seddex geesood ah kula jirta Olympiacos Aguibou Camara
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ka mid tahay seddex kooxood oo Premier League ah oo isku diyaarinaya inay u dagaalamaan saxiixa xiddiga Olympiacos Aguibou Camara .
20-sano jirkaan ayaa yimid kooxda ka dhisan Giriiga ka dib markii uu ka tagay kooxda Lille xagaagan, waxaana uu si wacan ula soo bilowday Olympiacos ee Super League.
Camara waxa uu ku faanaa afar gool iyo laba caawin sagaal kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan, sidoo kale waxa uu ku soo bilowday dhammaan afartii kulan ee heerka guruubyada ee Europe League.
Sida laga soo xigtay The Sun , kor u kaca degdega ah ee Camara ayaa soo jiitay dareenka Liverpool, laakiin waxay u baahan doonaan inay iska ilaaliyaan xiisaha Leicester City iyo Newcastle United si ay u helaan kubadsameeyaha.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in dhammaan saddexda kooxood ay la xiriireen wakiilka Camara, waxaana dadka ku dhow ciyaaryahanka ay filayaan inuu ku biiri doono Premier League sanadka soo socda.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Guinea ayaa lagu qiimeeyay aduun dhan 20 milyan ginni kooxda Olympiacos, heshiiska uu kula jiro kooxda Pedro Martins ma dhacayo ilaa 2025.
Monaco , Villarreal iyo Bologna ayaa sidoo kale la sheegay inay isha ku hayaan horumarka.